Nakaton’i Koety ny Youtube noho ny lahatsary anti-Miozolomana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2019 4:46 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2007)Vaovao farany: Nesorina ny fandraràna ny YouTube.
Taratasy nomerika misy ny memo. Sary: Aljarida.com
Namoaka baiko ho an'ireo mpamatsy tolotra aterineto eo an-toerana ny minisiteran'ny fifandraisana ao Koety, mandà ny fidirana ao amin'ny Youtube noho ny votoatin-dahatsary izay heverina ho manafintohina ny Miozolomana sy ny Islamo. Indro ny dikantenin'ny Reuters:
Hatramin'ny nanehoan'ny tranonkala ny Kôrany amin'ny endrika hira hiraina miaraka amin'ny oud (zava-maneno misy tadiny…) ary mampiseho sary tsy manaja ny Mpaminany Mohammad … miangavy anao hanomboka haingana ny fanakanana ny tranonkala www.youtube.com
Araka ny filazan'ny Aljarida.com, mandrafitra ny 15% amin'ny fifamoivoizana rehetra amin'ny aterineto any Koety ireo zavatra ataon'ny mpiserasera Youtube. Nitatitra ny Kuwait Times fa “ny fikarohana ny teny hoe ‘Koety’ dia nampiseho horonantsary 59,000 [ao amin'ny Youtube], anisan'izany ny horonan-tsary rehetra momba ny lozam-pifamoivoizana tao amin'ny Fahaheel Expressway sy ny fampisehoana nataon'i Jessica Simpson ho an'ny tafika amerikana tao Koety mba hanohitra ny fifidianana solombavambahoaka 2006 teo anoloan'ny tranon'i Abdullah Al- Efitrano Salem. “